Ora Sisa No Isaina Alohan’ny Fifidianana Filoham-pirenena ao Ghanà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2012 7:43 GMT
Iray andro sisa alohan'ny androm-pifidianana ao Ghanà ary mihamafy hatrany ny fampielezan-kevitra – androany vao maraimbe, narahina sioka sy feon'anjomara, hiakam-pifaliana sy tehaka ny fampielezan-kevitra sasany. Miakanjo t-shirt am-pireharehana an'ny antoko tohanany ny olona sasany manerana ny tanàn-dehibe, ny sasany manao izany amin'ny mangingina. Ny fahitalavitra kosa mandefa fandaharana misy hafatra momba ny filaminana avy amin'ny ankizy sy ny olo-dehibe manoloana ny herisetra amina tanàn-dehibe sasany.
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo – kandidà ao amin'ny mpanohitra nirotsaka ho fidianana filoham-pirenena ao Ghanà. Sary: Creative Commons (CC BY-SA 3.0) by Nana Addo.
@Macharia_M nisioka tamin'ny 5 Desambra 2012:
@Macharia_M: Amim-pahamatorana no andraisan'izy ireo ny fampielezan-kevitra ho an'ny filaminana. Na tamin'ny fandaharana mozika momba ny hiran'ny filaminana mandritra ny 15 minitra alefan'izy ireo aza. Mahafinaritra
@accradotalt nisioka tamin'ny 4 Desambra, ary nilaza hoe:
@accradotalt: Somary tafahoatra ireo hiran'ny filaminana- tahaka ny korontana alohan'ny fifidianana #Ganà.
Nampitandrina ny vahoaka ny Komitim-pifidianana ao Ghanà mba tsy hampiasa finday hakàna sary ny bileta halatsak'izy ireo rehefa ao anaty trano fisainana (isoloir). Na dia izany aza, toa tsy mety tamin'ireo mpifidy sasany ny fampitandremana.
Naneho hevitra mikasika ny fampitandremana ny vahoaka tao amin'ny MyJoyOnline, Freedom Fighter (Mpitolona ho an'ny Fahalalahana) nilaza ity:
Manan-jo hanambara izay kandidà tohanany ny olona tsirairay, ary mbola mitohy ny fividianam-bato (fividianana ny safidim-bahoaka) raha mbola firenena kapitalista ity. Mamela haka sary i Etazonia. Tsy afaka manakana ny fahalalahana izy ireo.
Naneho hevitra mikasika ny fampitandremana ihany, Kobbie nanoratra hoe:
Manontany ny fomba hampiharan'izy ireo izany aho. Fisavana alohan'ny hidirana ao amin'ny trano fisainana?
Mikasika ny resaka filaminana, @novisid, mpanohana miharihary ny antoko NDC Kongresy Demokratika Nasionaly (National Democratic Congress) nisioka hoe:
@novisid: Tsy vonona handeha hifidy ihany aho. Fa vonona hifidy an'i 4 Mahama [ny filoha am-perinasa John Mahama]. Manohitra ny korontana. FILAMINANA!
Toa hita fa nihamafy ny lahateny andro vitsy alohan'ny fifidianana, satria nampiasa fitaovana fampahalalam-baovao sosialy ireo mpikambana mavitrika amin'ny antoko mba hanohitra ny fanambaran'ireo mpifanandrina aminy .
@novisid mbola nisioka indray:
@novisid: Araka ny nambaran'i Bawumia, toa tahaka ny mpanao politika izay hitany rehetra, tokony antsoiny fotsiny hoe ‘fampielezan-kevitra’.
@novisid: Tsy mba ny fampianarana no nibahana nandritra ny adihevitra alohan'ny fifidianana fa ny hosoky (hala-bato) Akuffo Addo antsoina hoe SHS [Sekoly Ambony Maimaim-poana].
Mpanohana ny antokon'ny mpanohitra, Antoko Vaovao Tia Tanindrazana, @ohenebagyimah nisioka imbetsaka ho an'ny antoko andro maro mialoha ny fifidianana.
Tamin'ny 2 Desambra, hoy izy nanoratra:
@ohenebagyimah: Raha nilaza ny NDC (tamin'ny fampielezan-keviny) fa ” hanjaka ao Ghanà ny filaminana, fidio JDM [John Dramani Mahama] ary ny NDC” inona ny ambaran'izy ireo aminay? “
Tamin'ny 3 Desambra, hoy izy nisioka:
@ohenebagyimah: Mba hanan-danja tsaratsara kokoa ny safidinao (vato halatsakao), fidio i Nana Addo #3 amin'ny biletam-pifidianana.
Mahafinaritra tokoa ny hahita ny zava-miseho eo amin'ireo mpanohana ny antoko roa lehibe, NDC sy NPP, ao amin'ny fampahalalam-baovao sosialy amin'ny Asabotsy 8 Desambra rehefa vita ny fifidianana. Mbola hisy ny fifidianana fihodinana faha-roa amin'ny 28 Desambra raha tsy mahazo vato maherin'ny 50% ny ny mpifaninana.
1 andro izayAmerika Latina
3 andro izayMozambika